OMG ! वायरल भयो ६ खुट्टे भालुको तस्वीर, देखेर तपाई पनि पर्नुहुन्छ छक्क – Everest Dainik – News from Nepal
OMG ! वायरल भयो ६ खुट्टे भालुको तस्वीर, देखेर तपाई पनि पर्नुहुन्छ छक्क
काठमाडौं । भालु नाम सुन्ने वित्तिकै तपाई मनमष्तिस्कमा एउटा यस्तो आकृति बनाउनु हुन्छ । पूरै रौंले ढाकिएको ठूलो शरीर, जसका चार खुट्टा हुन्छन् । तर जापानमा वैज्ञानिकहरुले एउटा नयाँ प्रजातीको भालु पत्ता लगाएका छन् जुन पानीमा बस्छ र छ । त्यहाँभन्दा पनि अचम्भ र रोचक विषय त यो छ कि त्यो भालुका चारवटा नभएर ६ वटा खुट्टा छन् ।
वैज्ञानिकहरुले जब यसलाई पहिलो पटक देखें त्यसको सुन्दरता देखेर त्यसलाई उनीहरुले भालु नाम राखि दिए । तर यो भालुको शरीरमा कही कत्तै रौं छैन । यधपि जब यसका बारेमा गहिरो अध्ययन र अनुसन्धान भयो तब पत्ता लग्यो कि यो भालु पानीमा मात्रै बस्छ । र पानीमा मात्रै बाच्न सकछ । त्यसपछि वैज्ञानिकहरुले यसको नाम ‘पानीमा बस्ने भालु’ राखिदिए ।
वैज्ञानिका अनुसार, उनीहरुले यस्तो प्राणी पहिलो कहिल्यै देखेका थिएनन् । जब उनीहरुले यसलाई देखे तव उनीहरु आचम्भीत भए । यो भालुको ६ वटा खुट्टा छन् । साथै त्यसको मुख पनि अनौठो किसिमको छ । जुन शायद पानीमा बस्ने भएकोले त्यसअनुरुप विकसित भएको हुनुपर्छ ।
वैज्ञानिकहरुका अनुसार भलै यो प्रजाति पहिले कही दिखिएन तर यो प्रजाति नयाँ नभई कयौं पुरानी हो । र समय परिवर्तनसँग उसले आफ्नो विकास पनि गर्यो । वैज्ञानिकहरुले यो विचित्र प्राणीका बारेमा थप खोज र अनुसन्धान भइरहेको बताएका छन् ।
ट्याग्स: Japan, जापान, पानीमा बस्न भालु